Jenny | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / Jenny
ဆုပန်ထွာ – မတည့်အတူနေ
၀၁။ အားနာတယ် ၀၂။ Chatterholics ၀၃။ ဒါဟာအချစ်ကွယ် ၀၄။ ကဲယုံလိုက်ပါ ၀၅။ မတည့်အတူနေ ၀၆။ မေ့နေမှာပဲသူလည်း – Feat. ဂူးဂူး ၀၇။ မိချောင်းမင်းရေမခင်းနဲ့ – Feat. အေသင်ချိုဆွေ ၀၈။ နားလည်ပေးပါ ၀၉။ နည်းနည်းချစ်ရင်လစ် ၁၀။ ဖြတ်ပစ်လိုက်မယ် – Feat. စန္ဒီမြင့်လွင် ၁၁။ ဖြေးဖြေးချစ် – Feat. Jenny ၁၂။ ပင်လယ်နဲ့ကောင်းကင်
December 16, 2011 MMA အဆိုတော် (မ) စန္ဒီမြင့်လွင် ဂူးဂူး ဆုပန်ထွာ အေသင်ချိုဆွေ Jenny New Myanmar Albums 1 Comment